Tour – Somali Family
Walxo kala duwan oo la isku dhajiyey
Suuqa Qoyska : Gudaha iyo Dibadda
Qoysku waa wadnaha suuqyo yaryar oo badan. Jiilalku waxay ku hawlan yihiin hawlaha loo baahan yahay si ay u quudiyaan bulshada – dalbashada iyo soo qaadashada cuntada, khaanadaha kaydka, hilib-lidista, karraaniga, xisaabaadka, iyo waraaqaha sharciga ah. Suuqyo badan oo ay qoysku leeyihiin waxay ula dhaqmaan macaamiisha sida qoyska oo kale, iyagoo waqti wadaaga gudaha iyo dibadda ganacsiga.
RGS waa suuq ay qoysku leeyihiin. Waa dhamaan macaamiisheena Waxaan u aragnaa sidii hal qoys oo keliya. Ma iibineyno kaliya alaabtayada. Waxaan u shaqeyneynaa koox ahaan. Waxaan isku daynaa inaan is caawinno marka ay baahi jirto. Sida haddii ay jirto baahi ka jirta qoysaska leh waraaqaha shaqada, xaalad kasta oo caafimaad ama tarjumaad kasta ama baahi kasta oo gaadiid ah, waxaanu ka caawinnaa taas, sidoo kale.
—Ratna Khadka, la-milkiilaha, RGS Nepali Market, Burlington
Aabahay wuxuu ahaa hilib-jare. Oo adeeraday /abtiyaashay labaduba waxay u adeegi jireen macaamiisha. Wax badan ayay geeyeen guryaha dadka. Oo waxay noqon lahaayeen qayb qoyska ka mid ah ku dhawaad sababtoo ah waxay filan karaan waxa loogu yeero.
—Sister Marie Kieslich, ayeeyo u ah aasaasaha John V. “JV” Kieslich, Kieslich’s Market, Burlington
Waxay qaadataa gacmo badan si loo maamulo suuqa.
Xubnaha qoysku waxay ku tiirsan yihiin midba midka kale si uu u leexiyo shaqooyinka labaad, daryeelka ilmaha, iyo masuuliyadaha kale. Suuqyadii hore waxa lagu kala wareejin jiray jiilba jiilka xiga. Qoysasku way wada noolaayeen oo wada shaqayn jireen. Caadi ahaan waxay ku noolaayeen dabaqa sare ama meel u dhow, taasoo sahlaysa inay u adeegaan macaamiisha iyagoo wali ku jira nolosha qoyska. Carruurtu waxay ku koreen suuqa waxayna kaalmeeyeen meeshii looga baahnaa
Maanta qoysasku waxay inta badan ku nool yihiin xaafado fog ama xaafado fog, oo laga saaray nolosha suuqa. Qaar badan oo ka mid ah milkiilayaasha suuqyadu waxay hamiyaan nolol ka duwan caruurtooda, kuwaas oo ku mashquulsan iskuulada iyo ciyaaraha waxayna leeyihiin yoolal u gaar ah mustaqbalka.
Dukaankani waxa uu ka badan yahay habka lacag lagu noolaado. Waa sooyaalkeena iyo taariikhdeena iyo ilaalinta dhaqanka anagoo yeelanayna dukaan weyn. Laakiin marka hore waa inuu jecel yahay shaqadaas. Waa dareenkiisa. Waa wixii uu ku koray iyo waxa uu ka helay aabihiis. Markaa ma fududa in la iska daayo.
—Gabadha Axmed Caref, maareeyaha, Suuqa Caalamiga Nada, Winooski
Dhammaantood waxay ka shaqaynayeen dukaanka. Eeddaday Eva waxay ahayd hiliblaha, [Eedo] Sofiyana waxay ahayd gabadha umushay. Aabbahay [Sam] aad buu uga dambeeyay diiwaanka. Markii aan yaraa, waxaa jiray walaal John, oo isna dukaanka ka shaqayn jiray. Waxaan kaa caawin lahaa kaydinta khaanadaha. Markii aan wax yar ka weynaadey, waan wadi karaa diiwaanka. Waxay kaloo iga codsadeen inaan keeno.
—Merrill Epstein, oo uu awoowe u yahay aasaasaha Mayer Epstein, Epstein & Melnick, Winooski
Xilliga dayrta, qof kastaa wuu isu iman lahaa oo wuxuu samayn lahaa sauerkraut. Carruur ahaan, hawlo yar ayaa naloo qaban jiray. Waxay ahayd inaad gooyso dhammaan kaabajkaas. Ka dibna xawaashka, khalka. Dhammaadkii maalinta, foostooyinku waxay hore ugu jireen maqaasiinka, oo ay ka buuxsameen maaddooyinkooda ka dibna la xidhay sababtoo ah sauerkraut ayaa khamiiraya.
—Walaashay Marie Kieslich, ayeeyo u ah aasaasaha “JV” Kieslich, Kieslich’s Market, Burlington
Halka ay macaamiishu Qoys yihin
Macaamiishu waxay la mid noqdaan xubnaha qoyska xidhiidhka ka dhex abuurmay gudaha suuqa. In kasta oo cuntadu ay dadka ka soo geli karto albaabka, haddana waa kalsoonida iyo kalgacalka u dhexeeya macmiilka iyo mulkiilaha waxa iyaga dib u soo jiidaya. Ganacsigu waxa uu ku korayaa af ahaan, maadaama macaamiishu ay ku dhiirigeliyaan asxaabta iyo qoyska inay ka taliyaan suuqyada.
Halkan ayuu albaabka ka furay, dadkuna way yimaadeen,waxaan ognahay inuu bixiyo kirada, korontada, waxaanan doonaynaa inaan taageerno waxa wanaagsan ee uu sameynaayo.
—Victor Yonga, macaamiisha, M.Square Vermont, Winooski
Isla markii aan ka soo galo albaabka – waxay igu yiraahdeen, “Ah, xaggee joogtay?” Tani waxay la macno tahay inay i raadiyaan oo ay i danaynayaan, oo meelna ma jirto, meelna ma jirto, inaad aadi karto dadkuna waxay ku daneeyaan inaad wax soo iibsatid. Markaa waan jeclahay iyaga, waa walaalkay iyo walaashay.
—Issakha Kounta, macmiil, RGS Nepali Market, Burlington
Had iyo jeer waxay ahayd wax lagu farxo in la galo dukaanka si aad u aragto weji saaxiibtinimo oo la yaqaan. Chick iyo shaqaalihiisii waxay nabarteen dhammaan magacyada carruurta xaafadda. Markii aan dugsiga sare dhammeeyey, waxa uu iga joojiyey xafladda qalin-jebinta.
—Sheila Cavanaugh, macmiil, Suuqa Chick’s, Winooski
Inta badan suuqyada maxaliga ah, mararka qaarkood waad timid, qof in aad la hadasho, oo aad dareento in waqti qaar ka mid ah aad dareento in halkaas saaxiibtinnimo, aad dareento in aad qaraabo.
—Peter Keny, macmiil, Dukaanka Xalaal ee Bulshada, Burlington
Shaqada Adag ee Dhisida Nolol Wanaagsan
Lahaanshaha suuqu waxa uu siinayaa dariiq madaxbanaani iyo badbaado dhaqaale ee qoysaska dhawaan yimid.
Milkiilayaasha waxay shaqeeyaan saacado badan, inta badan waxay isku xiraan laba shaqo si ay nolol wanaagsan iyo mustaqbal u abuuraan caruurtooda. Milkiilayaasha suuqa hore waxay ka shaqeeyeen shaqooyinka labaad ee dharka iyo alwaaxda iyo warshadaha kale. Maanta milkiilayaal badan ayaa ka shaqeeya xilliyada shaqada ama meheradaha wax soo saarka si ay suuqa ugu jiraan saacadaha shaqada.
Waxaan jeclaan lahaa in dadku fahmaan sida ay u shaqeeyaan muhaajiriintu. Waxaan dalkan imid aniga oo aan Ingiriisi aqoon iyo oo haysta 45 doolar($45) oo hadda waxaan haystaa ganacsi guul leh. Taasina waa sababta oo ah waan shaqeeyay oo shaqeeyay, waxaanan bixiyaa cashuurta guriga iyo cashuuraha dugsiga. Waana sida ay nolosheydu tahay.
—Dado Vujanovic, milkiilaha, Suuqa Euro , ee Waqooyiga Burlington
Isagu muu lahayn waxbarasho jaamacadeed, balse waxa uu doonayey in ubadkiisu helaan waxbarasho wanaagsan iyo nolol wanaagsan. Waxa uu dareemay in ay run ahaantii tahay ganacsi qoys, halkaas oo aanu dhammaanteen ku soo biirnay. Waxa uu jeclaa lahaanshiyaha ganacsigiisa iyo in uu madax u noqdo.
—Judy Frumoff, gabadh, milkiilaha Morris Rome, Rome’s Groceries, Burlington
Waxaan u baahanahay inaan ka fikiro mustaqbalka carruurtayda, sidoo kale. Ma filayo in carruurtayda ay u baahan yihiin inay sameeyaan wax kasta oo aan horay u sameeyay. Haddii ay rabaan inay sii wadaan shaqadii aan hore u qabtay, way sii wadaan. Laakiin haddii aysan rabin, waxay leeyihiin doorasho iyaga u gaar ah. Waxaan rabaa inay iga fiicnaadaan, waxaanan rabaa inay sameeyaan wax ka duwan.
—Anthony Tran, oo ay dhaleen milkiilayaasha John iyo Huong Tran, Suuqa Phat Thai; mulkiilaha,
Saigon Jikada, Burlington
Mar walba waxaan u qaadanay wax hubaal ah. Awoowe ayaa dukaanka haystay awoowena waxa uu had iyo jeer joogay dukaanka.
—Walaashay Marie Kieslich, ayeeyo u ah aasaasaha “JV” Kieslich, Suuqa Kieslich, Burlington